Women are not allowed to step in to some exclusive places in the sacred place of the Buddha.
Women have been prohibited,to go on to the base rock of the kyaikhtiyo Pagoda,to the
inner room of the Maha Myatmuni Statue and to the higher terraces of the Pagodas.If a
female worshipper accidentally steps on the base rock,which shouldering the sacred rock
of the Kyaikhtiyo Pagodas,the whole area will be cloaked in black clouds.Tiger will maul
the intruder,it is believed.
Myanmar girls are one os the most beautiful girls of the world.Anthropology Professor
H.Leedon Lefferts of Drew University,the USA,said that the most beautiful are the
Vietnamese girls and the runners-up are the Myanmar girls.Professor H.Leedon Lefferts
studied the anthropology of the South East Asia.
DREW UNIVERSITYတက္ကသိုလ်မှAnthropologyပါမောက္ခProf:H.Leedon Leffertsက
Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 06:20
စိုးထက် - Soe Htet !9April 2008 at 07:25
ရှေးရိုး အစွဲ အလမ်း ကြီးတာ က လွဲ လို့ ကျန်တာ တော်တော်များများက လှပ အဆင်ပြေနေဆဲပါ ... :D
Nyein Chan Aung9April 2008 at 11:22
ညီမက နေ့စဉ်ပိုစ့်တင်နိုင်တယ်။ ပိုစ့်တွေကလည်း တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု သုတ ရသ တွေပေးနိုင်တယ်။ ချီးကျူးပါတယ်။
HEARTMUSEUM9April 2008 at 14:06
ဒါကြောင့် မမေက ချောတာကိုး.....
ရွှေပြည်သူ9April 2008 at 23:39
“ကမ္ဘာပေါ်တွင်၊အချောဆုံးအလှဆုံး မိန်းကလေးများထဲတွင်၊ မြန်မာမိန်းကလေးများ ပါဝင်သည်” ဆိုပြီး အထောက်အထားနဲ့ ပြောလို့ အားတက်လိုက်တာ သူငယ်ချင်းရေး)) ဗဟုသုတတွေ မျှဝေလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်း)
မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် 12 April 2008 at 07:29
Ba Kaung 12 June 2008 at 13:47